ပသီလူမျိုးစုစကားဝိုင်းကို (မနာလိုအုပ်စုကတိုက်ခိုက်၍ဖျက်သိမ်းခံရခြင်း)- စမျက်နှာ( 9) | Lumyo Chit
ပသီလူမျိုးစုစကားဝိုင်းကို (မနာလိုအုပ်စုကတိုက်ခိုက်၍ဖျက်သိမ်းခံရခြင်း)- စမျက်နှာ( 9)
1323 ယောက် ကြည့်ပြီးပြီ
တကယ်တော နားလည်ရခက်ပါသလား။ဒီခေါင်းစဉ်ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူများနေတာသိပါတယ်။
ကိုက်ညီတာချန်ထားပေးပါမယ်။အခြား Forum စကားဝိုင်းလိုဘယ်လိုမရေးရဘူး လို့ကန့်သတ်မထားဘူး။ စိတ်ကြိုက်ဝင်ရေးပါ။အသုံးဝင်တဲ့အထောက်အထားကို ကျွန်တော် ဆွဲထုတ် သုံးသွားပါမယ်။ပသီဆိုတဲ့နာမည်
ကို ထည့်မသုံးဘူးလို့ပြောနေတယ်။ကျွန်တာ် သဘောနာမည် သုံးခွင်မရှိဘူး။ဥပဒေဘောင်ပေါ်မှာ တင်ပေးတဲ့
အခါ အလိုလို ဥပဒေက ပသီ လို့ပြောရအောင်လုပ်လိမ်မည်။ဒီပေါ်ဆန္ဒစောနေရင် ဘာလုပ်ပြီးဘာကိုင်ရမှန်း မသိဖြစ်နေတယ်။ အလုပ်လုပ် မဲ့နေရာမှာ စောဒကတက်လာတောမဖြဘဲနေရင်လဲ မထီလေးစား ရာရောက်
တယ်။ လိုက်ဖြေနေတောလည်းအလုပ် ချိန်ပျက်သွားပါတယ်။ဝိုင်းရေးနိုင်တယ်။ဘောင်ဝင် ရင်ယူသုံးပါမယ်။
ဥပမာ တခုပေးပါမယ်။ ဂျီသြမေတြီ မှာ တရိဂံ ၂ ခု သဏ္ဍန်တူပါတယ်လို့ပြောနိုင်ဖို့အတွက် သူ့မှန်ကန်
ချက်တွေကိုအရင်တင်ပြထားဖို့လိုတယ်။အဲဒီမှန်ကန်ချက်ကြောင်းဒီ တြိဂံ ၂ ခု သဏ္ဍန်တူပါတယ်လို့ပြောရ
မှာလေ။ အခုလည်းဘဲ လက်တန်းပြောရင် ပြီးစလွယ်ရေးရင် နိုင်ငံတော် လက်ခံမလားအရင်စဉ်စားပါ။ဒီစာ
တမ်းက နိုင်ငံတော်သမ္မတထိ တင် နိုင်အောင်အကြံပြုစာတမ်းဆိုပြီး ကျွန်တော် ဆုံးဖြတ်ပြီးမှရေးနေတာပါ။
ကျွန်တော် ရေးပြီးမှ မကြိုက်ဘူးဆိုရင် အဒ်မင်အဖွဲ့က ဖျက်သိမ်းနိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။
ကော်နက်ရှင်းကောင်းတုန်းပြီးသလောက်တင် လိုက်အုန်းမယ်. စလာမ်
တကယ်တော နားလည်ရခက်ပါသလား။ဒီခေါင်းစဉ်ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူများနေတာသိပါတယ်။ အထင်အမြင်ကတစ်ယောက်တစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်
နားလည်ရခက်တယ်လို့ပဲ ထားလိုက်ပါတော့။ ဦးလေး ပြောတဲ့ ဒီခေါင်းစဉ် စိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူများ နေတာကိုသိပါတယ်
ဆိုတာထက် သမိုင်းမှာရှိပြီးသား ပသီ သမိုင်းတွေ ဦးလေးလုပ်လို့ တလွဲတွေဖြစ်သွားမှာ စိုးရိမ်သူတွေများတာပါ..
လက်ိရှိ ဒီ ဆွေးနွေးဝိုင်းမှာဆွေးနွေးသူတွေသူထဲမှာ ပသီ ဆိုတော့ မ၀ိုင်းတယောက်ပဲပါတယ်ခင်ဗျ..
ကျံတဲ့သူတွေ က အပေါ်ကပြောခဲ့သလို ဦးလေးလုပ်လို့ သမိုင်းမှာ ရှိပြီးသား ပသီသမိုင်းတွေ တလွဲဖြစ်သွားမှာစိုးရိမ်လို့ပါ..
စုဆောင်းတယ်ဆိုတာက အွန်လိုင်းမှာပဲ စုဆောင်းရေးသား နေတာမဟုတ်ပါဘူး..ကိုယ်တိုင်..စာကြည့်တိုက်တွေမှာ..
ပသီ လူမျိုးအစစ်တွေမှာ သွားရေ့ာက် လေ့လာ ပြီး စုဆောင်းတင်ပြပေးရမှာပါ google မှာတွေ့သမျှ တင်တာကို
သမိုင်းစုဆောင်းတာ ဆိုပြီး ဆိုင်းဘုတ်အကြီးကြီးတပ်ပြီး လုပ်နေသမျှတော့ လွဲနေအုံးမှာပဲ..
ဦးလေး ပြောသလို အစိုးရ ချမှတ်ထားတဲ့ဘောင် ဆိုရင်..
အဲဒီ အစိုးရခွင့်ပြုချက်အရထုတ်သမျှ ပသီ သမိုင်းစာအုပ်တွေကို
ဟုတ်ကဲ့ ..ကျွှမ်းကျင်ဆရာတဲ့ ပသီသမိုင်းဆရာတွေရှိပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်က မကျွှမ်းကျင်ဘူးဆိုရင် ကျွှမ်းကျင်တဲ့
ပသီ သမိုင်းဆရာတွေကို သွားရောက်တပည့်ခံတာပဲဖြစ်ဖြစ် အကူအညီတောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် အစကတည်းကြိုတင်
ပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်။ အမှားတွေ ကို ပြင်ပေး နေတာ ထက် အလွဲတွေကို ၀ိုင်းပြောနေတာတောင် ထပ်တင် တယ်
ဆိုကတည်း က ဦးလေးရဲ့ သဘောထားကို သတိထားမိပါတယ်။
အပြီးသတ်သုံးသပ်တဲ့အခါ ကိုယ်မူဝါဒနှင့်ကိုက်ညီရင်ယူမယ်မကိုက်ညီတာချန်ထား ပေးပါမယ်ခြား Forum စကားဝိုင်းလိုဘယ်လိုမရေးရဘူးလို့ကန့်သတ်မထားဘူး။စိတ်ကြိုက်ဝင်ရေးပါ။အသုံး ဝင်တဲ့အထောက်အထားကို ကျွန်တော် ဆွဲထုတ် သုံးသွားပါမယ်။
အဲဒီ အပြီးသတ်သုံးသပ်ဖို့က ကိုသန့်ဇင်ဖြိုးမေးတာနဲ့ တူပါတယ်။ကိုတင်မောင်အနေနဲ့ ဘယ်တော့ စုစောင်းမှုပြီးဆုံးမယ်ဆိုတာလေးသာ ကျနော်တို့ကိုပြောပြပေးပါ… အတိအကျမပြောနိုင်ရင် ခန့်မှန်းခြေလေးတော့ပြောပြပေးပါ… ဒါဒုတိယအကြိမ်တောင်းဆိုတာပါ… မမြင်သလိုလုပ်ပြီး ရူးသလိုလိုရွှေပျောက်သလိုလိုနဲ့ ဒီမေးခွန်းကိုရှောင်မနေပါနဲ့…
ပသီဆိုတဲ့နာမည်ကို ထည့်မသုံးဘူးလို့ပြောနေတယ်။ ကျွန်တာ် သဘောနာမည် သုံးခွင်မရှိဘူး
ဥပဒေဘောင်ပေါ်မှာ တင်ပေးတဲ့အခါ အလိုလို ဥပဒေက ပသီလို့ပြောရအောင် လုပ်လိမ်မည်။
ဘယ်လို တင်ပေးမလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျ..
။ဒီပေါ်ဆန္ဒစောနေရင် ဘာလုပ်ပြီးဘာကိုင်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတယ်။အလုပ်လုပ်မဲ့နေရာမှာ စောဒက တက်လာ တောမဖြဘဲနေရင်လဲထီလေးစားရာရောက်တယ်။လိုက်ဖြေနေတောလည်း အလုပ်ချိန်ပျက်သွားပါတယ်။
ကျတော်တို့ ဆန္ဒစောရအောင် ကျတော်တို့ လည်း ပသီလူမျိုးစုများမဟုတ်ပါဘူး.. စောဒက ဆိုတာ
ဦလေးလို ပသီ သမိုင်းကို offline မှာ တတ်ကျွှမ်းနားလည်သူတွေနဲ့ မလေ့လာပဲ
google မှာတွေ့သမျှတင်နေတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ ရှိနေအုံးမှာပါ…ကြုံတုန်းံ ပြောလိုက်ပါအုံးမယ်…
ဒီဆွေးနွေးခန်းအစ ကနေ အခုအထိ ဦးလေး google မှာတွေ့သမျှ
ဦးလေးက သမိုင်းကို ရှင်းရှင်းရေးရင် ဘယ်သူမှ လိုက်မထောက်ပါဘူး..မရှင်းမရှင်းရေးလို့ တွေ့သမျှ.အာလုံး
လောလောဆယ် အိပ်ချင်လို့ အိပ်လိုက်အုံးမယ်ဗျာ..နောက်နေ့မှ ဆက်ရေးအုံးမယ်..
ကိုယ်အဖေ အရွယ်လောက်ကြီးနဲ့ စကားတွေ အခွန်းတင် မပြောချင်ပါဘူး..
ဒါပေမယ့် တင်သမျှ တလွဲ..ပြီးတော့ ကိုယ်မဟုတ်သလို နေနေ နေလို့ သန့်ဇင်ဖြိုး မေတ္တာရပ်ခံနေတဲ့
Permalink အလိမ္မာ က on Tuesday တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
ကိုတင်မောင်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေး မြန်မာနိုင်ငံမှာကြီး မြန်မာစကားကို လုံးစိပတ်စိ နားလည်တဲ့သူတစ်ယောက်လို့ ယူဆပါတယ်။ ရိုင်းတယ်တော့မထင်စေချင်ပါ။ ကိစ္စကြီးကြီးကိုလုပ်မယ်ဆို Plan ချပြီးမှလုပ်ရပါတယ်ဆိုတာကို လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုတင်မောင်ကို ရှင်းပြဖို့လိုမယ်မထင်ပါ။ ကိုတင်မောင်ရေ အမ်အမ်အက်စ်ဝိုင်ထဲက မန်ဘာတော်တော်များများဟာ ကိုယ့်စည်းသူ့စည်းနားလည် အမြင်ကျယ် ဗဟုသုတပေါများသူတွေပါဆိုတာကို ကိုတင်မောင်သတိထားစေချင်တယ်။ လက်လွတ်စပါယ်နဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ပြောမထွက်တတ်ကြပါဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် အခုလို မေးမြန်းပြောဆိုတာခံရပြီဆိုရင် ကိုတင်မောင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုနေပြီဆိုတာ သဘောပေါက်စေချင်ပါတယ်။
ကိုသန့်စင်ဖြိုးဟာ ယောက်ကျားပီပီ ဒဲ့မေးထားတာ ကျွန်မမြင်ကတည်းက ကိုတင်မောင်အဖြေကို စောင့်နေတယ်။ ကျွန်မလိုစောင့်နေတဲ့သူဘယ်နှစ်ယောက်ရှိမလဲမသိပါ။ တော်တော်တော့များမယ်ထင်ပါတယ်။ ကိုတင်မောင်ကို လေးလေးနက်နက် တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒဲ့မေးထားတာကို တခြားစကားတွေမပါပဲ မပြောပဲ ဒဲ့ပြန်ဖြေပေးပါ။ တိုတိုတုတ်တုတ်လေးဖြေပေးပါ။ ကျွန်မလဲ ကိုသန့်စင်ဖြိုးအမေးနဲ့ထပ်တူ မေးပါရစေ။
ကိုတင်မောင်အနေနဲ့ ဘယ်တော့ စုစောင်းမှုပြီးဆုံးမယ်ဆိုတာလေးသာ ကျနော်တို့ကိုပြောပြပေးပါ… အတိအကျမပြောနိုင်ရင် ခန့်မှန်းခြေလေးတော့ပြောပြပေးပါ… ဒါဒုတိယအကြိမ်တောင်းဆိုတာပါ… မမြင်သလိုလုပ်ပြီး ရူးသလိုလိုရွှေပျောက်သလိုလိုနဲ့ ဒီမေးခွန်းကိုရှောင်မနေပါနဲ့…
Permalink ၀ိုင်း က on Tuesday တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
ဒီစာတမ်းကို နိုင်ငံတော် သမ္မတထိ တင်နိုင်အောင်ဟုတ်လား ……… တွေ့ကရာကောက်ထည့်ထားတာကို နိုင်ငံတော်သမ္မတဆီပို့ပြီး စာတမ်းအဖြစ်တင်မယ်ဆိုတာ သမိုင်းကို ပိုပြီးပျောက်သွားအောင်လုပ်နေတာလားဗျာ …….
ကိုတင်မောင်အနေနဲ့ စာတမ်းတင်မယ်ဆိုရင် …. အွန်လိုင်းမှာတင် တွေ့ကရာကောက်ယူစုဆောင်းနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ အပြင်မှာ တကယ်လက်တွေ့လုပ်ခဲ့သူ/လုပ်နေသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီး သေချာလုပ်သင့်တယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်သူဆိုတာတောင် ထုတ်မပြောရဲ၊ လူတွေကြားချမဆင်းရဲတဲ့သူတစ်ယောက် အများအတွက်တကယ်လုပ်ရဲလို့လား။ ကျွန်တော်လည်း ကိုတင်မောင်ရဲ့ အရည်အချင်းကို ရိပ်မိနေပါပြီ။
ကိုတင်မောင်က ပသီသမိုင်းစုဆောင်းတယ်ပြောပေမယ့် ……… ဒီဖော်ရမ်ထဲမှာ အမှိုက်ပုံကြီးဖြစ်နေပြီဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိထားမိပါရဲ့လား ……
ကိုတင်မောင်ရဲ့ ကိုယ့်စိတ်ခံစားချက်နဲ့သာကြိုးစားမှုကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ဆက်မရေးပဲ ဒီလောက်နဲ့သာ ရပ်ထားလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါ။ အပြင်မှာ သေချာလေ့လာပြီး ကိုယ်တိုင်အပင်ပန်းခံပြုစုပြီးမှသာ ကိုယ်တိုင်ခံယူကျင့်သုံးမှုနဲ့ ဆက်လက်ရေးသားလာရင်တော့ ၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပေးပါမယ်။
ဒီအတိုင်းသာ ဆက်ပြီး ပေါက်တတ်ကရစုနေမယ်ဆိုရင် …… ဒီဖော်ရမ်ကို ဖျက်သိမ်းဖို့ အက်ဒ်မင်ဆီ ကျွန်တော် တောင်းဆိုမှာပါ ……. ။
ဒီစာတမ်းက နိုင်ငံတော်သမ္မတထိ တင် နိုင်အောင်အကြံပြုစာတမ်းဆိုပြီး ကျွန်တော် ဆုံးဖြတ်ပြီးမှရေးနေတာပါ။
Permalink kotinmaung က on Tuesday တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
ဖြေထားပြီးသားပါ။ထပ်မံမေးတောလဲ စိတ်မကောင်းပါဘူး။အတတ်နိုင်ဆုံးပြီးစီးအောင်ကြိုးစားသွား ပါမယ်။ကိုယ့်အားလပ်ချိန် ၊ကိုယ်တိုင်စာစီစာရိုက် စသည်တို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးခန်းမှန်းခြေဖေဖေါ်ဝါရီ လ မှာပြီးနိုင်ပါတယ်။မနေ့က ဆိုဒ် ထဲ လုံ့ဝ ၀င်မရဖြစ်နေလို့ အတော်လေးဒုက္ခရောက်သွားတယ်။အီစန္ဒီချိုကို
အွန်လိုင်းတွေ့ လှမ်းမေးလိုက် ၊contact @gmail.com သို့ စာဖြင့်လှမ်းမေးလိုက်နှင့် အတော် ရှုပ်သွားပါတယ်။
နောက်ဆုံး အိပ်ခါနီးပြန်ဖွင့် ရလို့ ရသလောက် ရေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။– ဆက်လက်ဖေါ်ပြပါမည်ဟုလည်း
စကားခေါ်ထားသေးတယ်။ထပ်မံမေးတော လည်းသိရှိအောင်ထပ်မံပြောပါတယ်။ – စလာမ်
ဖြည့်စွက်၍ ပြည့်စုံ သော ပသီစာတမ်းတစ်ခု ပြုစုပါမည်။ ကုန်ကြမ်းမရမီ ကုန်ချော
မရနိုင်ပါ။သို့ဖြစ်ရာ အခုစုဆောင်းနေခြင်းမှာ ကုန်ကြမ်းသာဖြစ်သည်။အခြားတစ်ဖက်တွင်
၈ – သမိုင်းအထောက်အထားများ (၁၈၂၃ ခုမတိုင်မီကပင် အုပ်စုလိုက်မြန်မာနိုင်ငံ
တွင်ပင်ရင်းနိုင်ငံအဖြစ်နေထိုင်ခဲ့သော နေရာဒေသ အထောက်အထားများသည် အရေးကြီးဆုံး
၁၀ – စာတမ်းပြုစုသူမှ ခြုံငုံသုံးသပ်တင်ပြရန် -၎င်းတွင်
(ဂ) – ယဉ်ကျေးမှု ၊ဓလေ့ စရိုက် (ဃ) – ယနေ့ပသီလူမျိုးများ၏ဆန္ဒ သဘောထား စသည်များပြည်စုံစွာ သုံးသပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်
၁၀ – အခြားတင်ပြရန် အကြောင်းပေါ်ပေါက်လာပါက ဖြည့်စွက်တင်ပြရန် –
၁၁ – နိဂုံး
ကျွန်တော်အကူအညီတောင်းပြီးပြီ။မပေးတောလည်း သူတို့ကို ကျွန်တော်ဘာမှမပြောနိုင်ပါ။
ကိုယ်ကိုကိုယ် ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းအင်ရှာအလ္လာဟ် ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
HIV /AIDS မူကြမ်းတစ်ခုရေးဆွဲခဲ့တဲ့ အတိုင်းဒီဟာလည်းပြီးသွားမှာပါ။
Innal laha ma-as swa berin
“ လွတ်လပ်ရေးကျေညာစာတမ်း “
၁၉၄၈ – ခု ၊ဇန္န၀ါရီ(၄) ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့၊မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၀၉ ခုနှစ်၊ပြာဆိုလဆုတ် (၉) ရက်
မင်္ဂလာချိန် “လွတ်လပ်ရေးကျေညာစာတမ်း “ တွင်
အပိုဒ်(၄) ၌ “ ငါတို့သည် တစ်မျိုးတစ်ဘာသာ၊တစ်စိတ်တစ်ဒေသ၏ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမလိုလား၊
ကျောသားရင်သား သူကား ငါကား ခွဲခြားခြင်းကိုအလိုမရှိ “ ဟူ၍လည်းကောင်း၊
အပိုဒ် (၅) ၌ “ငါတို့ နိုင်ငံတောကြီ်းသည် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက် တစ်ဖွဲ့တစ်တစ်သင်း ၏အမွေအနှစ် မဟုတ်။ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်တစ်ဖွဲ့တစ်သင်း၏ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်။။မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်တစ်ဖွဲ့တစ်သင်း
က ချုပ်ကိုင်အနိုင်ယူ အကျိုးခံစားအပ်သောနိုင်ငံမဟုတ်။ အတိတ်ကာလ၌လည်းကောင်း ၊ယခုမျက်မှောက်တွင်
လည်းကောင်း၊ နောင်လာလတ္တံသော အနာဂါတ် ကာလ၌ လည်းကောင်း၊ငါတို့ပြည်ထောင်စုကြီးအတွင်း မှီတင်း
နေထိုင်ကြသောကြီးငယ် ၊နီးဝေး ကျား၊မ မခြား သစ္စတော်ခံလူသား ဟူသရွေ့တို့၏ အမွေအနှစ် အပိုင်ပစ္စည်း အကျိုး
ဟူသော လူ့ဘာသာ ၊လူ့တရား နှင့်အညီ ပြဌာန်းကျေညာမော်ကွန်းခြင်း
(သတင်းစာ ဆရာတစ်ဦး၏ ၁၉၆၇ – ဗမာ့မော်ကွန်းမှတ်တမ်း နှင့် ဒေါက်တာမောင်မောင်၏
တို့ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ (ပထမတွဲ) (၁၉၅၀) တွင်ဖေါ်ပြပါရှိသည်။
ကျွန်တော် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင်မလုပ်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ သမ္မတအခုမှာ ပေါ်တာပါ။
ယခင်ကကော နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲထံ ကိုယ်ပိုင်အမည်၊မှတ်ပုံတင်အမှတ် တပ်ပြီး တိုက်ရိုက်စာကော တင်ဖူး
ကျွန်တော် က အမည်မူရင်း၊မှတ်ပုံတင်၊လိပ်စာ နှင့်တကွ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်လက်ထက်က ကြီး (၃) ကြီး
ထံ စာတင်ဖူးတယ်။အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်နှင့်လည်းတွေ့ဖူးပါတယ်။ဒီလောက်ဆို သဘောပေါက်
ပါလိမ်မည်။ဒီအတွေ့အကြုံက တော ကျွန်တော်မှာ ရှိတယ်။ – ထွက်လာတဲ့တမ်းပေါ်မှာဝေဖန်ပါ။ ပြောပါ။ စလာမ်
Permalink kotinmaung က on Wednesday တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
Asalamu alikum warahamatulahei wabarakatahoo,
သူတစ်ပါးကိုကော်မန့် မပေးခင် ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ ကော်မန့် ကိုအရင်ဖတ်ပြီးမှကော်မန့် ပေးရင်သဘာဝ ကျတယ်။ သူများစာကိုဖတ်ပြီးကော်မန့်ပေးခြင်းဖြင့် ကိုယ်စာမဖတ်ဘဲ ကော်မန့်ပေးလိုက်တာ ကိုပေါ် လွင်နေတယ်။ကိုသန့်စင်ဖြိုး မေးခွန်းမှာ ကျွန်တော် ဖြေထားတာမလေ့လာဘဲ ကော်မန့်ပေးလိုက်ပြီးမှကော်မန့်ပေးခြင်းဟာ ကိုယ်စာမဖတ်ဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်။
ကျွန်တော် ဘာမှမပြောလိုပါဘူး။ကိုယ်ရေးချင်တဲ့အစီစဉ်က ဆွဲထားပြီးသားပါ။ဒီအချက်တွေတင်ပြနိုင်ဖို့အတွက်လဲအတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ လေ့လာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စာမရေးခင် အ ထောက်အထားကိုအွန်လိုင်းမှာ ရှိမရှိ အရင်ရှာတယ်။ရရင် ကိုယ်စာရိုက်ရ သက်
သာတယ်။ စာဖတ်ပရိသတ်တွေက အဲဒါကိုတစ်မျိုးတစ်မည် မြင်သွားတာမတတ်နိုင်ပါ။
အစက အခြားစာတမ်းတစ်ခုကို အရင်ပြုစုဖို့ပါ။အခြား တစ်ဦးက ဦးပြီး စကား
၀ိုင်းတင်လိုက်တော တော်တော်လေး ၀မ်းသာသွားတယ်။အခု အဲဒီစကား ၀ိုင်းမရှိတောဘူး။ဒါနဲ့ဒီ ခေါင်းစဉ်နှင့်ဘဲ စရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူတစ်ပါးကို အားကိုးပြီးဒီစာတမ်းပြုစုနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။အစက တည်းကစာတမ်း(၃) ခု ပြုစုဖို့ဆုံးဖြတ် ပြီးသားပါ။ ပသီသမိုင်းမှာ ဒဏ္ဍာရီ တွေပါနေကြောင်း ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ဒဏ္ဍာရီ အဟုတ်အမှန် ဖြစ်နိုင်မဖြစ် အထောက်အထား မရှိ။ယုံတမ်း စကားလိုဖြစ်ပါတယ်။
စာတမ်းပြုစုတဲ့နေရာမှာ ခိုင်လုံတိကျမှုမရှိတဲ့ ဒဏ္ဍာရီ တွေကိုချန်ထားမှာ အမှန်ပါ။လက်လှမ်းမှီရာခိုင်မာသောအထောက်အထားများကိုတင်ပြပါမည်။
ကျွန်တော်ကြောင်း ပသီသမိုင်းမပျက်စီးပါဘူး။တစ်ဖက်တစ်လှမ်းက ခိုင်မာသော အထောက် အထား တစ်ခုဖြစ်သွားမှာပါ။လူတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် အတွေးအခေါ်ဗဟုသုတ ပတ်ဝန်းကျင် ကျင်လည်မှု၊အသိုင်းအ၀ိုင်း မတူသလို စာရေးသူတစ်ဦး နှင့်တစ်ဦး တင်ပြပုံတင်ပြနည်း လည်းမတူဘူး။ ဒါတော
အင်ရှာအလ္လာ ကျန်းမာနေရင် ၊ ဖေဖေါ်ရီ လမှာ အဆုံးသတ်နိုင်မယ်လို့အပြည့်အ၀ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါက ကိုယ်အားလပ်ချိန်နှင့် ကိုယ့်စာရိုက်ချိန်အတွက် ကြန့်ကြာမှုပါ။
အတွက် Outline ကိုတင်ပြထားတာကိုကြည့်လျှင် အဖြေထွက်သွားပါပြီး။
Speak little , work much
kotinmaung က yesterday တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
ဒီစကားဝိုင်း စတာ( ၁၈-၁၂-၂၀၁၂ )ခုနေ့ပါ။ အားလုံး ပေါင်း (၂၁) ရက်သာ ရှိ သေးတယ်။ဘာမှအဟန့်အတား မဝင်ရင်တော ဖေဖေါ်ရီ လောက်ဆို ပြတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာခဏလောက်စိတ်အေးအေးထားပေးနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ်မည်။
ကျနော်ပြောဘူးသလိုပဲဗျာ၊ ကိုတင်မောင့်ကို ကွေ့ဝိုက်ပြီး မပြောကြပါနဲ့လို့၊ တည့်တည့် ကွက်ကွက် ကွင်းကွင်း လုံးစိပတ်စိ မြင်အောင် အတုံးလိုက်အတစ်လိုက် အားမနာတမ်း ပြောမှ ကိုတင်မောင်က နားလည်ပါတယ်။ တကယ်ပြောတာ
အဲလိုမှ မဟုတ်ရင် ကိုသန့်ဇင်ဖြိုး ပြောသလို ကိုတင်မောင် မမြင်သလိုလုပ်ပြီး ရူးသလိုလိုရွှေပျောက်သလိုလိုနဲ့ ပြောတဲ့လူက ပြောတာတခြား၊ သူပြန်ဖြေတာတခြားတွေ ဖြစ်ကုန်တော့တာပေါ့၊
ကျနော်ထင်တယ် အမှန်တကယ်က ရူးသလိုလို လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဗျ။ အမှန်က ကိုတင်မောင်က သေခြာကို နားကို မလည်တာပါ။ ကိုတင်မောင်ရေ Aphasia ဆိုတာများ ဖြစ်နေလား မသိဘူး။ ဆေးခန်းလေးဘာလေး ပြကြည့်ပါအုံးဗျာ။
ရှေ့မှာလဲ ကိုတင်မောင် လုပ်ခဲ့တဲ့ ဥပမာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ပရိုဖိုင်တွေမှာရေးတာ၊ ဖိုရမ်တွေ ဘလော့တွေမှာ တလွဲတွေ လုပ်ပြီးအပြောခံရတော့ ပိုစ်တွေဖျက်တာ၊ ဘလော့ပိုစ်က တဝက် လင့်ကြော်ငြာကတဝက်တို့၊ HIV ဖိုရမ် ၊ စကားပုံတွေ ဆက်ကြတဲ့ဖိုရမ်၊ စသဖြင့် စသဖြင့် ပြောမဆုံးနိုင်အောင် ကိုတင်မောင် မွှေတာတွေ အက်မင်တွေကို မေးကြည့်ရင် ပိုသိမှာပါ။ စီကာပတ်ကုံးရေးလိုက်ရင် ဒီဖိုရမ်က ပိုစ်တွေထက်တောင် များသွားနိုင်တယ်ထင်တယ်။
အမ အလိမ္မာကို ကျနော် ရှင်းပြချင်တယ်ဗျာ၊
ကိုတင်မောင်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေး မြန်မာနိုင်ငံမှာကြီး မြန်မာစကားကို လုံးစိပတ်စိ နားလည်တဲ့သူတစ်ယောက်လို့ ယူဆပါတယ်။
(မယူဆလိုက်ပါနဲ့ဗျာ သူ ရီပလိုင်း ပြန်တဲ့ပိုစ်တွေ ဖတ်ကြည့်ရင် သိမှာပါ)။
ကိစ္စကြီးကြီးကိုလုပ်မယ်ဆို Plan ချပြီးမှလုပ်ရပါတယ်ဆိုတာကို လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုတင်မောင်ကို ရှင်းပြဖို့လိုမယ်မထင်ပါ။
ဒါပေမယ့် အမရေ အခုက၊ လူကြီးဖြစ်တဲ့ကိုတင်မောင်ကို ကလေးတစ်ယောက်လိုပဲ သေခြာရှင်းပြဖို့လိုကို လိုနေတာကြီးဗျ
ကိုတင်မောင်ရေ MRI တွေဘာတွေ ရိုက်ကြည့်ပါအုံးဗျာ။ ကြိုတင်သိရတော့ ပိုကောင်းတာပေါ့။ Symptom တွေတော့ တော်တော်လေးကို များနေပြီဗျာ။ ကျနော်ထင်တာတော့ Anomic aphasia သို့မဟုတ် Global aphasia တခုခုပဲ။ မဟုတ်သော်ရှိ ဟုတ်သော်ရှိ ကြိုတင် သိရတော့ ပိုကောင်းတာပေါ့။ အဲဒိအတွက် ကျနော်တို့တွေ ကူညီနိုင်တာရှိရင်ပြောပါ။ အသက်ကြီးလာရင် ပိုဂရုစိုက်ရပါတယ်၊ စိုးရိမ်လို့ပါဗျာ။
အဲဗျာ၊ Aphasia မရှိဘူးလို့ ယူဆတယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော် အားမနာတမ်းပြောချင်တယ်ဗျာ။
တခုလောက်မေးပါရစေ ကိုတင်မောင်ရေ၊ စာတမ်း ပြုစုတယ်ဆိုတာ အခုလိုမျိုးကြီး အဲလိုကြီး လုပ်ရတာလား?? (ကျနော်မသိလို့မေးတယ်မထင်လိုက်နဲ့အုံးနော်၊ ကျနော်သိချင်တာက ကိုတင်မောင် နားလည်ထားတဲ့ Research လုပ်တာ၊ စာတမ်းပြူစုတာ ဆိုတာ ဘယ်လိုလဲ ဆိုတာ သိချင်တာပါ။ )
အဟဲ အဲလိုမေးတော့ ကိုတင်မောင် ဘယ်လိုပြန်ဖြေမလဲဆိုတာ မှန်းကြည့်လို့ရတယ်ဗျ။
ကျနော်က ဘာသာစကား ဘယ်နှမျိုးတတ်တာတို့၊ ဘွဲ့ဘယ်နှခုရတာတို့၊ ဘယ်စာတမ်းကို ဘယ်လိုလုပ်ဘူးတာတို့ ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန့်နဲ့ ဘယ်လိုတွေ့ဘူးတာတို့၊ အခု ဦးသိန်းစိန်ကိုတောင် ဒီစာတမ်းသွားပြမှာတို့ ဘာသညာ သရကာ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ လူအထင်ကြီးမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ မှားလိမ့်ဦးမယ်ဗျား။
စာတမ်းတခုလုပ်တယ်ဆိုတာ အင်တာနက်မှ တွေ့သမျှ၊ ဖြူဖြူမဲမဲ ဝါဝါနီနီ ဘာမှမစဉ်းစားပဲ ၊ ပသီ ဆိုတာ၊ မွတ်စလင်ဆိုတာ ပါတာနဲ့ အကုန် ကော်ပီကူးပြီး ဖိုရမ်ပေါ်မှာ အမှိုက်ပုံကြီး ဖြစ်အောင်တင်။ ပြီးတော့ အားလုံးက ထောက်ပြတော့မှ သုသေသန လုပ်သလိုလို စာတမ်းပြုစုနေသလိုလိုလုပ်၊ဖိုရမ်ကြီးက ကိုတင်မောင် တွေ့သမျှအကုန် လျှောက်ထည့်ပြီး လက်ပေကြီးနဲ့ နယ်ထားတဲ့ ၁၂ မျိုးဂျင်းသုတ်ကြီးဖြစ် ဖြစ်သွားရော။ (စဉ်းစားကြည့်ဗျာ ကိုတင်မောင် ဘယ်လိုပဲ ပင်းပန်းခံထားတယ်ပြောပြော ချွေးတတောက်တောက်နဲ့ နှပ်ချေးတောင် မသုတ်အားလို့ တွဲလောင်းဖြစ်နေတယ်ပြောပြော၊ အဲလို အသုတ်မျိုးကြီး ဘယ်သူစားချင်မှာတုံးဗျာ။ ) အကုန်လုံးက ထောက်ပြ၊ ကိုတင်မောင်ကတော့ ငါလုပ်တာ ဘာဖြစ်နေလဲ မသုံးသပ်ဘဲ လုပ်မြဲအတိုင်းဆက်လုပ်၊ အကုန်လုံးက အမြင်ကတ်သော်လဲ လူကြီးဖြစ်နေတာကတစ်ကြောင်း၊ အားနာတာကတစ်ကြောင်း ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးကွေ့ပတ်ပြီး ပြော။ ကိုတင်မောင်က နားမလည်။ နောက်ဆုံး ဘယ်တော့ပြီးမလဲ ဝိုင်းမေးတော့မှ timeline က ထွက်လာ၊ နောက်ဆုံးမှ structure ကိုပြော၊ ဘာတွေလဲဗျာ ကိုတင်မောင်။ ကိုတင်မောင် ဘရိန်းထဲမှာ ရှော့တွေဖြစ်နေပြီထင်တယ်။
ကိုတင်မောင်ကို စာတမ်းပြုစုနည်း သင်ပေးကြရအောင်
ဆိုပြီး ဖိုရမ်တခုတင်ပြီး၊ ဝိုင်းသင်ပေးလိုက်ရင် ကောင်းမယ်ဗျာ။
မဟုတ်ရင် ပသီသမိုင်းပြီး ရင် တခြား ရှိသမျှ လူမျိုးတွေ ကျန်တဲ့ သမိုင်းတွေ အကုန်လျှောက် ဖိုရမ်တင်ပြီး အရမ်းကာရော စုတယ် လုပ်နေရင် ဖိုရမ်တွေ ပွထပြီး ခက်ကုန်တော့မယ်။
လူငယ်တွေဆီက ပြန်သင်ရတယ်ဆိုပေမယ့် ရှက်စရာမရှိပါဘူး ကိုတင်မောင်၊ (ကိုတင်မောင်က ရှက်လဲ ရှက်မယ်မထင်ပါဘူး၊ တကယ်ပါဗျာ) တခုပဲ၊ သေခြာ ဂရုတစိုက်တော့ လိုက်သင်ယူဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ်ဗျာ။ ကျနော်တို့တွေ သေခြာ သင်ပေးမယ်လေဗျာ။ ပြီးမှ ကိုတင်မောင် စာတမ်းပြုစုရင် ပိုကောင်းမလားလို့။ အကြံပေးတာပါ။
အဟဲ အပေါ်က ပိုစ်မှာ Speak little , work much ဆိုတာပါလိုက်သေးတယ်။ မသိလို့ အခုကိုတင်မောင် လုပ်နေတာ အဲလိုလား Speak little, work much😛
ကျနော်ထင်တာကတော့ မြန်မာစကားပုံဖြစ်တဲ့ အသံကြောင့် ဖားသေ ဆိုတာနဲ့ ပိုကိုက်မယ် ထင်တာပဲ။ (အတင်းအကျပ်ကြီး အဲဒိစကားပုံကို စဉ်းစားမနေပါနဲ့အုံးဗျာ အကယ်၍ aphasia ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် အဲလို စဉ်းစားတာ ကိုတင်မောင်အတွက် သိပ်မကောင်းဝူးထင်တာပဲ။)
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ကိုတင်မောင်ကို စောင့်ရှောက်ပါစေ၊ အကျိုးရှိတဲ့ ကိစ္စတွေကို MMSY အတွက် နည်းမှန် လမ်းမှန် ဖြောင့်ဖြောင့် တမ်းတမ်း လုပ်နိုင်တဲ့ စွမ်းအား ပေးပါစေ၊ အကယ်၍ aphasia ဖြစ်နေပြီဆိုရင်လဲ အမြန်ဆုံး သက်သာသွားပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကိုတင်မောင်ရယ်… ကိုတင်မောင်က ကျနော့ စာကို Quote လုပ်ပြီး ဒီလိုရေးမှတော့ နောက်ကစာဖတ်သူတွေက ကိုတင်မောင်ကျနော့ကိုဖြေတာ ဒီစာပဲလို့ထင်ကြတာမမှားပါဘူး… ကျနော်ကတော့ အစောကြီးကတည်းက ဖေဖော်ဝါရီလလောက်ဆိုပြီးမယ်လို့ပြောလို့ ဝင်ကိုမရေးတော့ပဲစောင့်နေတာ…
ဒီနေ့ဆိုရင် ၂ရက်မြောက်နေ့ပေါ့… ကြားထဲမှာ ကိုတင်မောင်ဘက်က ဟိုလူပြောရှင်းပြ ဒီလူပြောရှင်းပြတွေပဲတက်လာတယ်… ဘာသမိုင်းအထောက်အထားစုစည်းတာမှလည်း တက်မလာဘူး… ကိုတင်မောင်စာရေးတာ အဓိကနဲ့ သာမညတော့ခွဲခြားတတ်ရဲ့လားဆိုတာသံသယဖြစ်မိပါရဲ့… ကျနော်ကတော့ တစ်ခုတည်းပဲထပ်ပြောမယ်… ဖေဖော်ဝါရီလလောက်ဆို ပြီးမယ်လို့ ကိုတင်မောင်ရဲ့ စကားကို တည်အောင် ကိုတင်မောင်ကြိုးစားပါ… ဖေဖော်ဝါရီနော် ဖေဖော်ဝါရီ… ကိုတင်မောင် စကားခံထားတာတော့တွေ့တယ် ဘာအဟန့်အတားမှမဝင်ရင် ဆိုပြီး ရေးထားတော့ ကျနော်ပြုံးမိတယ်… စိတ်ချပါကိုတင်မောင် ကိုတင်မောင်သာ ကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုယ်လုပ်ရင် ဘယ်သူကမှ ကိုတင်မောင်ကို မရေးပါနဲ့ဆိုပြီး လာပြီး လက်ဆွဲတားလို့မရပါဘူး… ဒီအချိန်မှာ လူတွေက ကန့်ကွက်နေရင်တောင် ကိုတင်မောင်ဘက်က ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာကို ဆုံးခန်းတိုင်အောင်လုပ်ရမှာမဟုတ်လား… အော်… မေ့လို့ ကွန်နက်ရှင်တော့ အကြောင်းမပြနဲ့ဗျာ… အဲ့ဒါကို ကျနော်လက်မခံနိုင်ဘူး… ကွန်နက်ရှင်မကောင်းရင်လည်း ကျနော် ၁၅ရက်လောက်အချိန်ပိုပေးမယ်…
ဒီတော့ ကိုတင်မောင်က ဖေဖော်ဝါရီလို့ပြောပေမဲ့ 2012, March 15th ကျရင် ဒီစုစည်းမှုပြီးစီးလောက်မယ်လို့ ကျနော်ယူဆပေးမယ်… Range တစ်ခုပေါ့ဗျာ… အစောဆုံးကဖေဖော်ဝါရီ နောက်အအကျဆုံး မာခ်ျလလယ်လောက်ဆိုရင် ကျနော်ပေးတဲ့အချိန်မလွန်ပါဘူးနော်… ပြီးရင်တော့ ကိုတင်မောင်ရဲ့ အချောသတ်စာတမ်းပဲဖြစ်ဖြစ် စာတမ်းအကြမ်းထည်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်တို့မြင်ရဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်… အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်လည်း ကိုတင်မောင်တင်ထားတဲ့စာတွေအားလုံးအတွက် ကျနော့ဘက်က မေးသမျှမေးခွန်းတွေကို ကိုတင်မောင်ဖြေကြားပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်…🙂 ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ
မစွမ်းဆောင်နိုင်တာကို ကျွန်တော်ကိုလည်းဟန့် တား
ကြိုက်တာရေး ဖြေစရာ အကြောင်းမရှိပါ။
← ပသီလူမျိုးစုစကားဝိုင်းကို (မနာလိုအုပ်စုကတိုက်ခိုက်၍ဖျက်သိမ်းခံရခြင်း)- စမျက်နှာ( 8)	ပသီလူမျိုးစုစကားဝိုင်းကို (မနာလိုအုပ်စုကတိုက်ခိုက်၍ဖျက်သိမ်းခံရခြင်း)- စမျက်နှာ( 10) →